ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် ပြည်သူနှင့်အတူ ကျရာကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်များအား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ တိုက်တွန်း - Yangon Media Group
ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် ပြည်သူနှင့်အတူ ကျရာကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်များအား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ တိုက်တွန်း
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၁၅
ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် ပြည်သူများနှင့်အတူကျရာ ကဏ္ဍမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် ကိုယ်စားလှယ်များအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ဇူလိုင် ၁၅ ရက် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ပထမနေ့တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားရာ၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်က အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအောင်မြင်မှသာ မိမိတို့ရဲ့နောင်လာနောက်သား မျိုးဆက်တွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အမွေတွေထားခဲ့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များဟာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ပြည်သူများနဲ့အတူ ကျရာအခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်တယ်”ဟု ၎င်းင်းကပြောသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ရေစီးကြောင်းတွင် လိုက်ပါပြောင်းလဲတိုးတက်နိုင်သောနိုင်ငံအဖြစ် ဖန်တီးပုံဖော်သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ဆောင်ရွက်သည့်အခါ အဓိကကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲမှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်သာဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်နိုင်ရန်အတွက် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးသည် အရေးအကြီးဆုံး မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်နေသကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီကို အခြေခံ သော ဖက်ဒရယ်မူများရရှိရန် မိမိတို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ¤င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လွှတ်တော်များမှ အဓိကတာဝန်သည် ဥပဒေပြုရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယတာဝန်ဖြစ်သည့် စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိခြင်း တာဝန် ကိုလည်း ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ယင်း သို့ ဆောင်ရွက်ရာ၌ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျော် လွန်ပြီး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည့်ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင် အထူးသတိပြုကြရမှာဖြစ်ကြောင်း ဦးတီခွန်မြတ်က ပြောသည်။
ယခုကျင်းပမည့်ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလ အတွင်း ဆွေးနွေးကြရမည့်ဥပဒေကြမ်း ၁၄ ခုရှိပြီး၊ အဆိုများအနေဖြင့် ၁၂ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလအတွင်းက တင်သွင်းခဲ့ရာဆွေးနွေးရန်ကျန်ရှိနေသည့် အဆို သုံးခုနှင့် ယခုအသင့်ဖြစ်အဆို ၁၂ ခုရှိသည့်အတွက် ဆွေးနွေးရန်အဆိုစုစုပေါင်း ၁၅ ခုရှိကြောင်း၊ အသင့်ဖြစ်ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းမှာ ၁ဝ၉ ခုရှိကြောင်း ယခင်အကြိမ်များက ကျန်ရှိခဲ့သည့်ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း ၂၂ဝ ရှိသည့်အနက် မေးခွန်း ၁၁၅ ခုကို ယခုအစည်း အဝေးကာလအတွင်းမှာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်လျာထားပြီး ကျန်မေးခွန်း ၁ဝ၅ ခုကို စာဖြင့်ဖြေဆိုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပေါင်မပြည့်၊ လမစေ့ဘဲ မွေးလာသည့်ကလေးငယ်များ ရည်စား ရနိုင်ခြေနည်းပါး
တိုင်းအစိုးရရုံးရှေ့ လာရောက်တောင်းဆိုသော အထည်ချုပ်လုပ်သားများ ပြဿနာ မကြာမီနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပေးမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား
လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာ ၇၀ဝ ခန့်ကို ထိုင်းအစိုးရ စောင့်ရှောက်ထား
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူနှင့် ပြည်သူများကို အလေးထားသော တရားမျှတသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ??
ထရန့်၏ ကုန်သွယ်ရေး မူဝါဒကြောင့် အမေရိကန် လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်ရဟု အမေရိကန် ကုန်သည်ကြီးများ ?
ဂျူဗင်တပ်အသင်း တောင်ပံ ကစားသမား ပီဂျာကာကို အငှားစာချုပ်ဖြင့် ရှော်ကေးခေါ်ယူ
မြန်မာ – ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး (ဒလ) တံတား ပိုင်တိုင်မိုင်တိုင်ပြား ၂၂ ခု ဖျက်ဆီးခံရမှု နိုင်ငံ??